အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ဖမ်းမိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများ (Photo: Police)
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုံးအရင်း ဝင်ရောက်လာတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆိုးဝါးတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေနေတွေကြောင့်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ လုံခြုံရေးကောင်စီက ပြောဆိုနေချိန်မှာပဲ ကန်ချဘူရီ ပြည်နယ် စိုင်ရို့နယ်စပ်ဝင်လမ်းကနေ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ တနေ့တည်း အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၀၀ ကျော် ဝင်ရောက်လာကြောင်း နယ်စပ်လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ထိုင်းနယ်မြေတွေထဲ ဝင်ရောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းဝန်ကြီး ချုပ်Mr. Prayut Chan-o-cha က နှစ်နိုင်ငံကြားက နယ်စပ်လမ်းတွေကို လုံခြုံရေး ပိုမိုတင်းကြပ်ဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အခုလို အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်လာနေတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုးဝါးလာမှုနဲ့နယ်စပ်ကျေးရွာ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ စစ်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာနေတဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း လုံခြုံရေးကောင်စီက အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ တရက်တည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၀၀ ကျော် ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်း AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့က အလုပ်သမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုရဲမင်းကလည်း အခုလိုပြောပါတယ်။
“တရားမဝင် လမ်းကြောင်းတွေ လူမှောင်ခိုတွေ လူကယ်ရီတွေကတဆင့် ဝင်နေကြတာအတော်များတယ်။ မနေ့ကတနေ့တည်းမှာပဲ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကမ်ချနဘူရီ စိုင်ရို့နယ်စပ်တခုတည်းကပဲ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၀၀ ကျော် ဝင်လာတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တုန်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတရက်တည်းကို ၂၆၀ ထိဖမ်းမိတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းတွေအရ ၂ လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာတာ ၇၀,၀၀၀ ကျော်ထိလောက်ရှိနေပြီလို့ ပြောတယ်။ ထိုင်းလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဒီလောက်ထိ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်လာတာကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေကြောင့်လို့ ပြောနေကြပြီ။”
အောက်တိုဘာလ၂၇ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာလည်း ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ရနောင်းမြို့ က နေ ချုံဖော်ပြည်နယ်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ လူနာတင်ယဉ်ကားနဲ့သယ်ဆောင်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးကိုလည်း ထိုင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် နေ့တနေ့တည်းမှာပဲ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ချင်းမိုင် ပြည်နယ် ဖန်မြို့နယ်အတွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၂ ဦး နယ်ခြားစောင့် တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
အခုနေစဉ် ထိုင်းနိုင်ငံထဲ အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် ပြည်တွင်းမှာလည်ပတ်နေတဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ရပ်နားတာတွေ မြန်မာပြည်က နေထွက်ခွါသွားတာတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲတွေဖြစ်ရတယ်လို့ ကိုရဲမင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။
“စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံဟာ ပိုပြီးဆင်းရဲကြပ်တည်းလာတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေလည်းပျောက်ဆုံးကုန်တယ် ။ ရှိပြီးသားကုမဏီတွေစက်ရုံတွေ လည်း ပြန်လည်ပြီး ထွက်ခွါသွားကြတာများလာတယ် ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးနေမှန်းသိရက်နဲ့ နေ့တိုင်းဖမ်းခံရမှန်းသိလျက်နဲ့စွန့်စားပြီး ဝင်ရောက်လာနေတာပါ။”
ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလည်းကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေလည်းရပ်နားထားပြီးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရဖို့ကလည်း ခက်ခဲနေတာပါ။ ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နေ့စဉ် ဝင်လာနေပေမယ့်အလုပ်အကိုင်ရဖို့က ခက်ခဲနေပြီး လူကုန်ကူးသူတွေရဲ့သားကောင်တွေ ဖြစ်နေရတယ်လို့လည်း ကိုရဲမင်းက ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတရားဝင်ကော တရားမဝင်ပါ ၃ သန်းထက်မနည်း ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဒုက္ခတွေမတည်ငြိမ်မှု ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လည်း အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံထဲကို အထောက်အထားမဲ့မြန်မာတွေ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ပွညျတှငျးနိုငျငံရေးကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံသားမြား ထိုငျးနယျစပျဖွတျကြျောမှုရှိနေ
ထိုငျးနိုငျငံအတှငျး မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အလုံးအရငျး ဝငျရောကျလာတာဟာ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ဆိုးဝါးတဲ့နိုငျငံရေးအခွနေတှေကွေောငျ့လို့ ထိုငျးနိုငျငံ လုံခွုံရေးကောငျစီက ပွောဆိုနခြေိနျမှာပဲ ကနျခဘြူရီ ပွညျနယျ စိုငျရို့နယျစပျဝငျလမျးကနေ အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျနေ့ တနတေ့ညျး အထောကျအထားမဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား ၄၀၀ ကြျော ဝငျရောကျလာကွောငျး နယျစပျလုံခွုံရေးရဲတပျဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဒီသတငျးကို ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မအေးအေးမာက သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
အခုရကျပိုငျးအတှငျး ထောငျနဲ့ခြီရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ ထိုငျးနယျမွတှေထေဲ ဝငျရောကျလာတာနဲ့ပတျသကျပွီး ထိုငျးဝနျကွီး ခြုပျMr. Prayut Chan-o-cha က နှဈနိုငျငံကွားက နယျစပျလမျးတှကေို လုံခွုံရေး ပိုမိုတငျးကွပျဖို့ လုံခွုံရေးကောငျစီကို ညှနျကွားခဲ့ပါတယျ။ အခုလို အလုံးအရငျးနဲ့ ဝငျရောကျလာနတောဟာ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာ နိုငျငံရေးအခွအေနဆေိုးဝါးလာမှုနဲ့ နယျစပျကြေးရှာ တိုငျးရငျးသားနယျမွတှေမှော စဈပှဲတှေ ဆကျတိုကျဖွဈလာနတေဲ့အကြိုးဆကျတှကွေောငျ့ဖွဈကွောငျး ထိုငျး လုံခွုံရေးကောငျစီက အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျနကေ့ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံအတှငျးမှာ တရကျတညျးနဲ့မွနျမာနိုငျငံသား ၄၀၀ ကြျော ဝငျရောကျလာတဲ့အကွောငျး AAC မဟာမိတျအဖှဲ့က အလုပျသမားရေးတကျကွှလှုပျရှားသူ ကိုရဲမငျးကလညျး အခုလိုပွောပါတယျ။
“တရားမဝငျ လမျးကွောငျးတှေ လူမှောငျခိုတှေ လူကယျရီတှကေတဆငျ့ ဝငျနကွေတာအတျောမြားတယျ။ မနကေ့တနတေ့ညျးမှာပဲ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ကမျခနြဘူရီ စိုငျရို့နယျစပျတခုတညျးကပဲ မွနျမာနိုငျငံသား ၄၀၀ ကြျော ဝငျလာတယျ။ ထိုငျးနယျစပျ ရဲတပျဖှဲ့က ပွောပါတယျ။ အောကျတိုဘာလ ၂၅ ရကျနတေု့နျးကလညျး မွနျမာနိုငျငံသားတရကျတညျးကို ၂၆၀ ထိဖမျးမိတယျ။ ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့သတငျးတှအေရ ၂ လအတှငျး မွနျမာနိုငျငံသားတှေ တရားမဝငျ ဝငျရောကျလာတာ ၇၀,၀၀၀ ကြျောထိလောကျရှိနပွေီလို့ ပွောတယျ။ ထိုငျးလုံခွုံရေးကောငျစီကလညျး မွနျမာနိုငျငံသားတှေ ဒီလောကျထိ အလုံးအရငျးနဲ့ ဝငျရောကျလာတာကလညျး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ အခွအေနကွေောငျ့လို့ ပွောနကွေပွီ။”
အောကျတိုဘာလ၂၇ရကျနေ့ မနကျပိုငျးမှာလညျး ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ရနောငျးမွို့ က နေ ခြုံဖျောပွညျနယျကို မောငျးနှငျလာတဲ့ လူနာတငျယဉျကားနဲ့ သယျဆောငျလာတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား ၁၀ ဦးကိုလညျး ထိုငျးလုံခွုံရေးစဈဆေးရေးဂိတျက ဖမျးဆီးလိုကျပါတယျ။ အောကျတိုဘာ ၂၇ ရကျ နတေ့နတေ့ညျးမှာပဲ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ခငျြးမိုငျ ပွညျနယျ ဖနျမွို့နယျအတှငျး ဝငျရောကျလာတဲ့မွနျမာနိုငျငံသား ၅၂ ဦး နယျခွားစောငျ့ တပျက ဖမျးဆီးခဲ့ပါတယျ။
အခုနစေဉျ ထိုငျးနိုငျငံထဲ အလုံးအရငျးနဲ့ဝငျရောကျလာနတောတှဟော မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးပွီးတဲ့နောကျ ပွညျတှငျးမှာလညျပတျနတေဲ့ စကျရုံအလုပျရုံတှေ ရပျနားတာတှေ မွနျမာပွညျက နထှေကျခှါသှားတာတှကွေောငျ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှဟော အလုပျအကိုငျအခကျအခဲတှဖွေဈရတယျလို့ ကိုရဲမငျးက သုံးသပျပါတယျ။
“စဈအာဏာသိမျးပွီးတဲ့နောကျ နိုငျငံဟာ ပိုပွီးဆငျးရဲကွပျတညျးလာတယျအလုပျအကိုငျအခှငျ့အလနျးတှလေညျးပြောကျဆုံးကုနျတယျ ။ ရှိပွီးသားကုမဏီတှစေကျရုံတှေ လညျး ပွနျလညျပွီး ထှကျခှါသှားကွတာမြားလာတယျ ထိုငျးနိုငျငံထဲကိုမွနျမာနိုငျငံသားတှေ အလုံးအရငျးနဲ့ဖမျးဆီးနမှေနျးသိရကျနဲ့ နတေို့ငျးဖမျးခံရမှနျးသိလကျြနဲ့စှနျ့စားပွီး ဝငျရောကျလာနတောပါ။”
ထိုငျးနိုငျငံထဲမှာလညျးကိုဗဈကပျဘေးကွောငျ့စကျရုံအလုပျရုံတှလေညျးရပျနားထားပွီးအလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးတှရေဖို့ကလညျး ခကျခဲနတောပါ။ ဒီအခြိနျမှာမွနျမာနိုငျငံသားတှေ နစေ့ဉျ ဝငျလာနပေမေယျ့အလုပျအကိုငျရဖို့က ခကျခဲနပွေီး လူကုနျကူးသူတှရေဲ့သားကောငျတှေ ဖွဈနရေတယျလို့လညျး ကိုရဲမငျးက ဆိုပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံထဲမှာမွနျမာနိုငျငံသားတရားဝငျကော တရားမဝငျပါ ၃ သနျးထကျမနညျး ရှိနပွေီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့နိုငျငံရေး စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး ဒုက်ခတှမေတညျငွိမျမှု ပဋိပက်ခတှကွေောငျ့လညျး အိမျနီးခငျြးထိုငျးနိုငျငံထဲကို အထောကျအထားမဲ့မွနျမာတှေ နစေ့ဉျ ဝငျရောကျနဆေဲဖွဈပါတယျရှငျ။